Wasiir Ceynte Oo La Kulmay Soomaalida Magalada Minneapolis+Sawirro – Radio Muqdisho
Wasiir Ceynte Oo La Kulmay Soomaalida Magalada Minneapolis+Sawirro
Jaaliyada ayaa ka muuqatay Farxad gaar ah iyago u hamuun qabay soo dhaweynta Wasiirka iyo in uu warbixin guud ka siiyo xaalada uu dalka Soomaaliya marayo.
Jaaliyada ayaa Su’aalo la xariira xaalada dalka weydiiyey Wasiirka isagoo ka wada jawaabay su’aalihii la waydiiyey waxana goobta ka hadlay oo jaaliyada matalayey Sheekh C/raxmaan Shariif oo ka mid ah culumada gobolka Minnesota ayaa wasiirka ku ammaanay howl karnimadiisa iyo dadaalkiisa ku aaddan Somalia, isagoo ugu duceeyay in Illaahey u fududeeyo shaqadiisa Wasiirka iyo guud ahaan madaxda dalka Soomaaliya.
Dadka Kulankani ka qeyb galay ayaa waxa ay u badnaayeen Aqoonyahano, Dhalinyaro, Culumaa’udiin, Waxgarad, iyo Dumarka Soomaaliyeed iyagoo si gaar ah iyo guud ba uga hadlay sidii ay kaalintooda uga qeyb qaadan karaan dib u dhiska dalka.
Waxaa Makarafoonka lagu soo dhaweeyey Wasiirka isagoo ka warbixiyey xaalada dalka uu marayo, “Ma jirto cid aan Al-shabaab ahayn oo diiddan Dowlanimada dalka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed, iyaguna waa soo dhammaan doonaa,” ayuu yiri C/ramxaaan Caynte.
“Markii aad dalka ka fiiriso dhinacyo badan waxaa kuu muuqaneyso in rajadu ay soo noqoneyso, waayo waxaa soo noolaanaya nolosha iyo kalsoonida qofka Soomaaliyga, gaar ahaan waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee aas-aasiga ah” ayuu sii daba dhigay Wasiir Caynte – agaasimihii hore ee machadka daraasaadka siyaasadda iyo cilmibaarista ee Heritage.
Mar uu ka hadlayay arrimaha siyaasadda dalka ayuu sheegay inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah. “Xukuumadda iyo baarlamaanku waxay isla afgarteen inaysan dhici karin doorasho ay codkooda ku dhiiibtaan dhamaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, laakiin waxaan umada Soomaaliyeed u xaqiijineynaa inaysan dhici doonin muddo kororsi” ayuu yiri Mudane Caynte.
Xildhibaano Guddoonka Barlamaanka U Gudbiyay Soo Jeedin Lagu Laalayo Mooshin ay Horay M.weynaha Uga Keeneen Xilibanno Kale oo Baarlaanka ka tirsan+Dhageyso
Xulka Qaranka Ee Cayaaraha Fudud Oo Congo Uga Qeybgalaya Ciyaaraha All African Games 2015+Sawirro